शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८ ०७:०७:४८
सुर्खेत । तीन वटा प्रदेशको मौसम पूर्वानुमान सुर्खेतको रातानाङ्लाबाट गरिने भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर १३ रातानाङ्लामा जोडिएको मौसमी राडार सञ्चालनमा आएसँगै कर्णालीसहित प्रदेश नम्बर पाँच र सुदुरपश्चिम प्रदेशको मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना सुर्खेतबाटै थाहा पाउन सकिने भएको हो । यो नेपालकै पहिलो मौसमी राडार हो ।
संघीय सरकार जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको ‘रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ’ (राडार)ले मौसमी अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्ने छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४ असारबाट निर्माण शुरु भएर ०७५ माघबाट परीक्षण कार्य शुरु गरेको राडारको मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ । करिब १ सय ५० किलोमिटर रेडियससम्मको मौसमी अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्ने भनिएको उक्त राडारले कर्णाली प्रदेशसहित प्रदेश नम्बर ५ का रोल्पा, बाँके, बर्दिया र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाहरुमा मौसमबाट हुने घटनाको बारेमा पूर्व जानकारी दिनेछ ।
विश्व बंैकको आर्थिक सहयोगमा करिब ३० करोडको लगानीमा राडार निर्माण सम्पन्न भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक सुरजकुमार वैद्यले जानकारी दिए ।
राडरले खासगरी वर्षाको किसिम, हिमपात वा असिनाको मात्रा तथा हावाहुरीको दिशा र गतिको मापन गरी विस्तृत तथ्याङ्क दिने महानिर्देशक वैद्यको भनाई छ ।
महानिर्देशक वैद्यले ‘डोप्लर राडार सि–बेन्ड’ प्रविधिमा आधारित उक्त राडार सञ्चालनमा आएसँगै यसअघि चीन, भारतलगायतका देशहरुबाट प्राप्त हुने वायुमण्डलीय सूचनामा मात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए ।
‘राडारबाट प्राप्त सूचनाहरु विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, यातायात, कृषि, पर्यटन तथा पर्वतारोहणलगायतका क्षेत्रका लागि उपयोगी हुन्छ’ उनले भने, ‘यसले वायुमण्डलको तत्कालको सूचना दिनसक्ने भएकाले मौसमजन्य हवाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयोगी हुन्छ ।’
विभागका उप–महानिर्देशक तथा आयोजना प्रमुख जगदिश्वर कर्माचार्यले यसअघि सुर्खेतको कार्यालय कोहलपुरमा स्थानान्तरण हुँदा नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई परिरहेको, नियमित विद्युत् आपुर्तिको अभावमा जेनेरेटर सञ्चालन गर्दा इन्धन अभाव हुने र आवश्यक कार्यालय र दक्ष कर्मचारी नहुँदा राडार सञ्चालनमा कठिनाई पर्नेजस्ता समस्या हुनसक्ने बताए । योसँगै बाँकी भू–भागहरुको निरन्तर मौसमको निगरानीका लागि पाल्पाको रिब्दिकोट र उदयपुरको गढीमा मौसमी राडारहरु जडान गर्ने कार्य शुरु भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
के हो राडार ?
‘रेडियो डिटेक्सन एण्ड रेन्जिङ’ (राडार) एउटा विद्युतीय प्राणाली हो । यसले मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी जानकारी दिन्छ । यो पूर्ण रुपमा विद्युतीय प्रणाली भएकाले यसको लागि विद्युत् अनिबार्य आवश्यकता पर्छ । सुर्खेतमा जडान गरिएको राडारले १ सय ५० किलोमिटरसम्मको करेन्ट सूचना दिन्छ, भने २ सय ४० किलोमिटरसम्मको पूर्वानुमान गर्न सकिने उप–महानिर्देशक कर्माचार्यले जानकारी दिए । सुर्खेतमा जडान भएको राडार नेपालकै पहिलो मौसमी राडार हो ।
कसरी सूचना दिन्छ ?
राडारमा विशेष गरेर दुई वटा सिग्नलले काम गर्दछन् । एउटा ईको सिग्नल र अर्को पज सिग्नल । राडारले ईको सिग्नल छाड्छ भने पज सिग्नल लिन्छ । राडारबाट छाडिएको ईको सिग्नल बादलमा गएर ठोकिँदा त्यहाँको मौसम जस्ताको तस्तै उतारेर पज सिग्नलमा परिणत भएर राडारमा फर्किन्छ । जसको आधारमा मौसम सम्बन्धी जानकारी पाउन सकिने उप–महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाई छ । यस्तै निर्माण गरिएको राडारको डोमभित्र रहेको मौसमी एक्सरे मेसिनले पनि जस्ताको तेस्तै मौसम खिच्ने र त्यसको जानकारी दिने गर्दछ ।
२ सय ४० किलोमिटरसम्मको मौसमी विवरण थाहा पाउन सकिने भएकाले भारतबाट आउने मनसुन कुन समयमा र कुन गतिमा आउछ भन्ने पनि राडारले पहिलेनै पूर्वानुमान गर्न सक्ने महानिर्देशक कर्माचार्यले बताए । राडारले २ घण्टापछि हुने मौसमको बारेमा जानकारी दिने भएकाले मौसम बदलिबाट हुने बाढी पहिरोजस्ता घटनाबाट नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मद्दत गर्ने उप–महानिर्देशक कर्माचार्यको भनाई छ । राडारले सामान्यतया विपद्को समयमा सोझै सूचना संकलन गर्ने र स्थान विशेषमा वर्षा, हिमपात, असिना र हावाहुरीको सम्भाव्य प्रभावको विस्तृत तत्कालीन पूर्वानुमान गर्न सक्ने छ ।
सुर्खेतमा पनि कार्यालय रहन्छ – मन्त्री पुन
राडारको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्री वर्षमान पुनले राडारको कार्यालय कोहलपुरसँगै सुर्खेत पनि रहने बताएका छन् । यसअघि कर्णाली पश्चिमको मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमान गर्ने कार्यालय कोहलपुर सारिएको थियो ।
मन्त्री पुनले अब सुर्खेतमा पनि तत्काल कार्यालय स्थापना हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले सुर्खेत र कोहलपुर दुवै ठाउँमा कार्यालय रहने गरी काम अघि बढाएका छौँ ।’ मन्त्री पुनले आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर्मचारी संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) गरेर केही समयमा नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने बताए ।
हामी आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छौँ । उनले भने, ‘केही समयमा नै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ । र एक महिनाभित्र यहाँबाट मौसमसम्बन्धीका कामहरु शुरु हुन्छन् ।’ सुर्खेतमा जडान भएको राडारले प्रकोप जोखिममा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने बताए ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर १८, २०७६, ११:५७:००
बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाइ कर्णाली सरकारले २ लाख दिने शुक्रवार, कार्तिक ५, २०७८ 0